Acquia: Chii chinonzi Mutengi Dhata Platform? | Martech Zone
Chishanu, January 10, 2020 Chipiri, Mbudzi 10, 2020 Douglas Karr
Sezvo vatengi vachikurukura uye kugadzira kutengeserana ne bhizinesi rako nhasi, zviri kuwedzera uye kuomarara kuchengetedza tarisiro yepakati yemutengi mune chaiyo-nguva. Ndanga ndine musangano mangwanani ano nemutengi wedu anga achingova nematambudziko aya. Vake email vekutengesa mutengesi vakasiyana kubva kune yavo nhare yekutumira mameseji kunze kwenzvimbo yavo yedhata. Vatengi vaibatana asi nekuti iyo yepakati data yakanga isina kuwiriraniswa, mameseji dzimwe nguva aikonzerwa kana kutumirwa nedhata data. Izvi zvaive zvichigadzira hombe kudiwa kwevashandi vavo vevashandi uye zvichitsamwisa vatengi vavo. Tiri kuvabatsira mukugadzirisazve system vachishandisa mameseji akasiyana API izvo zvinochengetedza kutendeka kwedata.
Ndiyo ingori mishoma nzira iri kukonzera nyaya. Fungidzira ketani yenzvimbo dzakasiyana-siyana nekutendeka kwevatengi, kutengesa kushambadzira, kudyidzana munharaunda, zvikumbiro zvevashandi, data rekubhadhara, uye kudyidzana kwenhare. Wedzera kune izvo iko kuyananiswa kwemhinduro dzekutengesa kuburikidza neomni-chiteshi dhata sosi… yikes. Ichi ndicho chikonzero Vatengi Dhata Mapuratifomu dzakashanduka uye dziri kuwana traction munzvimbo yebhizinesi. CPD dzinogonesa mubatanidzwa kubatanidza uye mepu dhata kubva kumazana enzvimbo, ongorora iyo data, kugadzira fungidziro dzinoenderana nedhata, uye zvirinani uye zvakaringana kuita nevatengi vavo pane chero chiteshi. Chaizvoizvo, iri 360-degree maonero emutengi.
Chii chinonzi CDP?
Iyo data yevatengi chikuva (CDP) ndeye yakasanganiswa yevatengi dhatabhesi inotarisirwa nevashambadzi iyo inobatanidza iyo data yekambani yevatengi kubva kushambadziro, kutengesa uye nzira dzekushandira kugonesa mutero wevatengi uye kutyaira ruzivo rwevatengi. Gartner, Hype Cycle yeDhijitari Kushambadzira uye Kushambadzira
Maererano CDP Institute, Mutengi weDhata Dhata ane zvinhu zvitatu zvakakosha:
CDP inogadzirwa nemushambadzi - CDP inovakwa uye inodzorwa nedhipatimendi rekushambadzira, kwete iro bazi rezveRuzivo Technology. Zvimwe zviwanikwa zvehunyanzvi zvinofanirwa kumisikidza nekuchengetedza CDP, asi hazvidi iro hunyanzvi hwehunyanzvi hwehunyanzvi hweyakajairika dura rekuchengetedza dhizaini. Izvo zvinonyanya kukosha ndezvekuti kushambadzira kuri mukutungamira kwekusarudza izvo zvinopinda musystem uye izvo zvinoratidzira kune mamwe masisitimu. Kunyanya, zvinoreva kushambadzira kunogona kuita shanduko pasina kukumbira mvumo kune chero munhu, kunyange zvingave zvichiri kuda rubatsiro rwekunze.
CDP inogadzira inoramba iripo, yakabatana kasitoma database - CDP inogadzira maonero akazara emumwe mutengi nekutora dhata kubva kumasystem akawanda, kubatanidza ruzivo rwakanangana nemutengi mumwe chete, uye kuchengetedza ruzivo kuteedzera maitiro nekufamba kwenguva. CDP ine zvitupa zvemunhu zvinoshandiswa kunongedza mameseji ekushambadzira uye kuteedzera mhedzisiro yematanho ekushambadzira.
CDP inoita kuti data riwanikwe kune mamwe masisitimu - data rakachengetwa muCDP rinogona kushandiswa nemamwe masisitimu ekuongorora uye kugadzirisa kudyidzana kwevatengi.
Acquia Mutengi Dhata uye Engagement Hub
Sevashambadziri vanowedzerwa nekuwedzera nechero ruzivo rwevatengi, kuisa pakati pavo data revatengi mumigwagwa, pamatanho ekubata, uye nekureba kwenguva yehupenyu hwevatengi kuri kukosha. Acquia mutungamiri mune ino indasitiri uye yayo Vatengi Dhata uye Engagement Hub inopa:
Dhata Kubatanidzwa - sanganisa rako rese data, mune chero fomati, kubva kune chero dhata sosi padhijitari uye yemuviri makiteshi ane anopfuura zana pre-akavakirwa ma connector nemaAPIs.
Data Data - simbisa, dedupe, uye ipa hunhu hwakadai sehunhu, jogirafi, uye shanduko yekero kune vese vatengi. Iine kufanana uye kusanzwisisika kuenderana, AgilOne inosanganisa zviitiko zvevatengi kune imwechete vatengi kodhi kunyangwe paine zita chete, kero, kana email mechi. Dhata yevatengi inovandudzwa ichienderera mberi saka inogara ichisanganisira iyo freshest data.
Kufanotaura Ongororo - kuzvidzidzira-kudzidza fungidziro dzekugadzirisa dzinozivisa AgilOne's analytics uye kukubatsira zvirinani kubatana nevatengi. AgilOne inopa pamusoro pe400 kunze-kwebhokisi bhizinesi kuburitsa metric inogonesa vashambadzi kugadzira uye kutsanangura chero nzira yavanoda yekuzivisa uye kuita mukati mechikumbiro - pasina tsika yekodhi.
360-Degree Makasitoma Profiles - gadzira yakazara-omni-chiteshi nhoroondo yevatengi vako, uchibatanidza data rakadai sewe wega mutengi rwendo, webhusaiti uye email kubatanidzwa, yapfuura omni-chiteshi nhoroondo yekutengesa, demographic data, chigadzirwa kufarira uye mazano, mukana wekutenga, uye fungidziro analytics, kusanganisira mukana wekutenga nemasumbu mutengi uyu ndeake. Aya ma profiles anoronga zvine hungwaru kupi kwekudyara, maitiro ekuita munhu, uye maitiro ekuita kuti vatengi vako vafare.
Omni-Chiteshi Dhata Kumisikidza - mukati mehukama hwepakati, vatengesi vanogona zvakare kugadzira uye kuvhura zvemagariro, nhare, tsamba dzakananga, nzvimbo yekufona, uye mushandirapamwe wechitoro, uchiita vateereri, mazano, uye chero imwe dhata yekubvisa, inowanikwa kune chero chishandiso mukati meako ecosystem.
Yakagadziriswa Kugadziriswa - kuronga mameseji akasarudzika, zvemukati, uye mishandirapamwe pamatanho edhijitari uye epanyama, zvichipa vashambadziri kuenderana kwezwi zvisinei nekuti mutengi anobata nguvai kana kupi. AgilOne inopawo vashambadziri chokwadi chekuti vari kuendesa meseji chaiyo kumunhu wega wega, sezvo AgilOne inovimbisa kuti hunhu hwese hwakavakirwa pane imwechete, yakachena, yakaenzana dhatabhesi revatengi rekodhi.
Tags: 360-degreeagilonecpddata yemutengiMutengi Dhata Platformnhoroondo yevatengikubatanidzwa hubomni-chiteshi
Yako Guest Blogger Yekutarisa